Xijaabka iyo Shaqada | Somaliska
Af-Soomaali / Nolosha / Shaqada & Ganacsiga
Telefishinka Sweden ayaa baaritaan uu ku sameeyay sida loo arko haweenka xirta xijaabka ay gabadha Muslimiinta gashadaan iyo mida aan wadan markii ay timaado shaqo raadinta. Baaritaanka ayaa soo bandhigay in ay ku adagtahay gabdhaha xijaabka leh in ay shaqo helaan marka loo barbar dhigo kuwa aan wadan. Telefishinka ayaa diray 2 gabdhood oo midna xijaabantahay midna aysan xijaabneyn ayagoo isku waxbarasho iyo waayo aragnimo leh. Labada gabdhood ayaa ku kala duwnaa in mid ay xijaabneyn oo magac Muslim ay lahayd halka mida kale aysan xijaabneyn oo magac Swedish ay lahayd, gabdhaha ayaa dalab u diray 200 shaqo. Gabadha aan xijaabneyn oo magaceeda qiyaaliga uu ahaa Emma Svensson ayaa waxaa la soo xiriirtay 35 shirkadood, halka gabadha kale ee xijaaban oo magac looga dhigay Evin Ziadi ay soo weceen 8 shirkadood oo keliya. Baaritaankaan ayaa soo bandhigaya sida ay ugu adagtahay gabdhaha Muslimiinta ah ee xijaaban iyo xitaa raga Muslimiinta ah ee aan magac Swedish laheyn in ay shaqo helaan. Arintaan ayaa la is dhihi karaa waa cunsuriyad xaga shaqada ah ee ka jirta Sweden.
Telefishinka Sweden ayaa baaritaan uu ku sameeyay sida loo arko haweenka xirta xijaabka ay gabadha Muslimiinta gashadaan iyo mida aan wadan markii ay timaado shaqo raadinta. Baaritaanka ayaa soo bandhigay in ay ku adagtahay gabdhaha xijaabka leh in ay shaqo helaan marka loo barbar dhigo kuwa aan wadan.
Telefishinka ayaa diray 2 gabdhood oo midna xijaabantahay midna aysan xijaabneyn ayagoo isku waxbarasho iyo waayo aragnimo leh. Labada gabdhood ayaa ku kala duwnaa in mid ay xijaabneyn oo magac Muslim ay lahayd halka mida kale aysan xijaabneyn oo magac Swedish ay lahayd, gabdhaha ayaa dalab u diray 200 shaqo.
Gabadha aan xijaabneyn oo magaceeda qiyaaliga uu ahaa Emma Svensson ayaa waxaa la soo xiriirtay 35 shirkadood, halka gabadha kale ee xijaaban oo magac looga dhigay Evin Ziadi ay soo weceen 8 shirkadood oo keliya.
Baaritaankaan ayaa soo bandhigaya sida ay ugu adagtahay gabdhaha Muslimiinta ah ee xijaaban iyo xitaa raga Muslimiinta ah ee aan magac Swedish laheyn in ay shaqo helaan.
Arintaan ayaa la is dhihi karaa waa cunsuriyad xaga shaqada ah ee ka jirta Sweden.
asc dhaam bahada aqrisata bogan waxaan raba xooga inaan wax kadhaho arintan oo ah arin waadax ku ah dhannan swedan oo dhan habka cusirinimada dadban ee loladhaqmo dadka wata magaca muslika marka arintan waxaa waxkabadalikara xafiska shaqada oo keena meelaha shaqada lagabixiyo dad firfir coon oo xiisaya habka isdhaxgalka bulshada swedan saanhada mafiicna waayo waxaa jira dad badan oo mudo joogay wadanka oo aan xata malikaliya shaqo helin taasna waa cusiriyadan qaba aniga waayo see qofna kuwaayay halmalin oo kaliya shaqo qofna kuhelay labsho iyo wax kabadan waxaa arkaysa dhalinyaradii waawada shaqalayihin islaamo old ah oo labalaba shaqo lasiiyay soo dhibaato mahan inqofka dhalinyarada shaqo waayo mida kale halkaan waxaba dadkii xujo looga dhigay körkot kii laeeyahay si sahala malagu qadan karo maxaa swedan udiiday sida america inay is fududeyso körkot ka ama shaqada waayo america qofka afrika ka imado week kadib shaqoow helaa swedana qof joogay labatan sano oo shaqo laana arkee mida kale qaxootiga dhinaca shaqada madaxa looga istaagay waayo adiga dhan waxalaga dhiga qof aan waxba ogay markaarintaan inay swedan wax kabadasho aan qaba oo dadka certa ka joojiya oo siiyan shaqo war wax kale iskadhaafe dhul tirtir xata hada raad satid swedan waxaa ladhaha maxa qibrada oo ladahay marka waa hab cusiray oo ah ashaqo kusiin mayo waayo qof aan dhul tir tiri karin majiro aan umalayna lakin wadamada kale waxy horumar kugaareen habka shaqada oo loosiman yahay inta qofkaa lasheekay satid xata wuxuu ku dhaha war hadaan dhalashoqato waa sii taga waayo shaqo maku haysti swedan marka swedan waa inay albaabada ufurta dadka soogalootiga sida america ama uk hadii kale qaxootiyo dhan mardhaw waalaga weynaswedan waayo awalba dadkay dadka ukeeni jiran hadana shaqo laanti aay ku siidarsatay dadkeenis lan waliba wadanka waxaa ku arkee dadbadan ooo ku dhahayo maxaan isweda ku jooga caruurtaydi waalay diiday shaqo makuhaysti aniga waxaa igaroonnwadankan kasoo hajiray oo xabada kasoctay marka taas waxy ku timid habka qaxootiga looladhaqmo qofjoooga shansano oon shaqo helin malinkaliya see wadanka ku jeclaan kara waxaa dareemaysa inaatahay qaxooti lakin qofka jooga america shanbil madareemo inuu yahay qaxooti marka swedan waa in ay habkaan badasha oo sameyan isdhaxgal habkacusuriya meel walba oosweda aykajirta marka dadka xafiska shaqada gacnta kuha waainay bdalan dadka dadka shaqada siiya oo keenan dad furfuran oo xiiseya siyasada soogalotiga halkaas an ugabaxa fikirkaygi ahaa xaga shaqada swedan midakale soomaliya meel waba jogtan is jeclda oo dareema dalkeeni burburay eesomaliya manta hadii dalkeyga nabad ahaan laha habeen swedan kumahooyden somaliya nabad nabad iyo barwaaqo somaliya nabad kolaey rajada ilaahay lagama qusto qofwalbo walaka somaliga soo dhaweyso wawalka kuladhashay oo kale fadlan anka tagno qabiilka iyo fikirada xunxun ee nalaharay soliya guul guul guul somalya nabad wsc dhamtiin byyyyyyyyy